Indlu esemaphandleni iKornblume kwisiqithi saseUsedom - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni iKornblume kwisiqithi saseUsedom
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguEgil
UEgil unezimvo eziyi-31 zezinye iindawo.
IHaus Kornblume yindlu evulekileyo enabantu abayi-8. Indawo yokuhlala enamagumbi aliqela imalunga ne-130 m2 kwaye inamagumbi okulala amane, ikhitshi elinento yonke, indawo yokubasa umlilo, igumbi lokuhlambela evulekileyo kunye nendlu yangasese yeendwendwe kwaye inefenitshala yale mihla. Le ndlu inetreyini entle, igadi, ibala lokudlala labantwana kunye nesauna yokuphumla.
I-LIEPER Winkel PENINSULA – MHLAWUMBI YEYONA NDAWO YOKUQALA
e-Usedom indalo kunye nokuzola embindini we-Usedom Nature Park kunye nendawo ephantse ibe yi-600 km2.
Ukufika wedwa yinto emnandi, kungakhathaliseki ukuba usondela phi kwi-Lieper Winkel. Iindlela ezimangalisayo zamantongomane, iindlela ezijingayo emasimini namahlathi aneekati ezindala zokuloba nezindlu ezinamavili.
Umbuki zindwendwe ngu- Egil
Indlu i-Kornblume yindlu evulekileyo enamagumbi amabini eyenziwe nge-okhi yeCarpathetic. Iibheyisi zesilingi kunye nezinto zangaphakathi ezinemigangatho, kunye nomphantsi onamafutha kwi-okhi kunye ne-plaster yobumba, zibonisa ubuntu bale ndlu yeholide eyakhiwe ngendlela ekhusela indalo.
Indlu i-Kornblume yindlu evulekileyo enamagumbi amabini eyenziwe nge-okhi yeCarpathetic. Iibheyisi zesilingi kunye nezinto zangaphakathi ezinemigangatho, kunye nomphantsi onamafuth…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Krienke